Indonesia in Focus: Abantu baye baphelelwa ukuvumelana nemvelo.
Abantu baye baphelelwa ukuvumelana nemvelo.
The ride wawungakapheli (378) (Ingxenye amathathu namashumi ayisikhombisa ayisishiyagalombili), Depok, West Java, Indonesia, September 30, 2015, 3:18 pm). Phakathi 1960 futhi 1970 emzaneni elidabukisayo, futhi emzaneni umfula emfuleni wayn elidabukisayo futhi namanje ehlane. Ababaningi enabantu, kokubili zendawo (Dayak imicibisholo) Bugis kanye nezihambi eziqhamuka ngakuzo Java. Ukuze sifinyelele emzaneni umfula ethathela edolobhaneni New Ulu, Balikpapan ngokuvamile abantu usebenzisa ngesikebhe esincane (with a isigwedlo), futhi lapho umfula aphinde imisinga swift (ngenxa imvula) bese ithatha izinsuku kufika edolobhaneni umfula komfula, manje emzaneni kwaba kakade kanye emzini Balikpapan, futhi umgwaqo ukufinyelela kwaba lula kakade, mhlawumbe wheel drive izimoto ezine kanye ngesithuthuthu. Izakhamuzi bangamaRoma imicibisholo Dayak ibilokhu isuka kwesinye isizukulwane kuya sihlala kulo mzana enhla umfula wayn elidabukisayo. Umphakathi uhlala ezivela emikhakheni ukulima, kodwa ngenxa yesimo ezweni abalimi ngokuvamile irayisi yokulima kungenziwa kuphela ukuvunwa kanye ngonyaka. Kodwa ngokuvamile ngaphezu irayisi ekhula, abalimi ngokuvamile ukuxubanisa amasimu imifino, ezifana ikhukhamba, sasigaya upopo, amabele kanye umdumbula. Ngakho, uma supply elayisi esitokisini ukudla mpilo, abalimi kufanele ukudla okwanele esitokisini of umdumbula, umbila noma ommbila phakade etholakala ehlathini, Ngaphezu izithelo ezifana sasigaya upopo notamatisi agqitshwayo, emahlathini namanje abaningi Durian kanye rambutan futhi tan (duku ehlathini). Nakuba izinhlanzi nezinye side izitsha ngokuvamile bangamaSulumane ukuhlasela inyamazane (inyamazane) Dayak basibiza brackish, kanti izakhamuzi zendawo Kaharingan Hindu, futhi animsme Christian bayazingelana inyamazane futhi izingulube. Izakhamuzi akuvamile zingela Python indathane futhi elenga egatsheni lesihlahla eduze komfula. Yingakho uma ngisho noma eduze komfula ziningi Python, izakhamuzi buthule ababegwedla isikebhe isikebhe kusukela esezansi ukuba Enhla ngaphandle kokuphazanyiswa, nakhu okuye kwashiwo abaningi babulawa ngendlela ukugoqa noma Python ziklebhukile yiyona hunter (amasosha) kuvame adubule ikhanda inyoka , Nakuba Ukuphazamiseka kwezizinda zamanzi asemasha inhlanzi kakhulu bephila emfuleni ngisho iso lakhe elikwazi ukubona, ngoba umfula icacile. Izakhamuzi ngokuvamile ngokuvamile ukuyengela inhlanzi, noma ukubeka isicupho bamboo izinhlanzi (sikubiza Isithokelo). The abalimi Kwathi ngaphambi kokutshala irayisi, ngokuvamile evulekile ezweni ukulima kwamahlathi ovuthayo. Ngoba uma abalimi elizweni esicacile ngokungena abakhethayo (imimese alahlwayo / machete) ukuze hectares ezimbili Umhlaba kuthatha izinyanga eziningi esanda wadala ezimbili amahektha ezweni epulazini, kanti uma kushiswe, kuphela phakathi nenkathi ngesonto. Nokho, abalimi bendawo njengoba kakade, bangakwazi ashise ehlathi endaweni okuwukuthi eyi, uma ufuna ukusebenzisa amahektha amabili, abese eshiswa amahektha amabili kuphela, banayo izindlela ukuthi ushisa amahlathi musa basakaze futhi basakaze yonke indawo. Ngakho, esiwusizo ngokuphila ezifuywayo of abalimi, ngisho imicibisholo Dayak longhouses owakhiwe phakathi amakhanda 3 kuya 5 wamakhaya endlini eyodwa. Ukudla zabo nsuku zonke ngokudla irayisi (irayisi / irayisi) kuhambisana inhlanzi, inyama (nomqwayiba) inyamazane, kanye nemifino enhlobonhlobo, ezifana amaqabunga ngemidumbula ikhukhamba. Ukuthi ukuvuna ngokwabo, futhi ukhule unyaka, eziba isivuno irayisi, ummbila, umdumbula futhi sago, kungcono nje lauknya efanayo sepnjang izinhlanzi ngonyaka Ukuphazamiseka kwezizinda zamanzi asemasha noma inyama nomqwayiba izinyamazane (inyamazane) noma ingulube (Dayak Christian / Hindu Kaharingan) Iningi Dayak inkolo yobuKristu noma Hindu Kaharingan, kodwa ikakhulukazi Dayak imicibisholo, ngoba iningi labo liphila the asogwini esifundeni imicibisholo, ngokuvamile ogwini is kakhulu ezihlobene abayimizulane imvelaphi Bugis / Bajau (Sulawesi) babe Muslim, abaningi kangaka Dayak imicibisholo ulandela izimfundiso inkolo the Bugis / Bajau lokhu. Ngoba ukudla eyisisekelo (ukudla) labantu etholwe evela endle etholwe emahlathini (sago), bese abantu bengayi lokudlela ezungeze kwamandla emali kanye negagasi nokudilizwa (nokudilizwa) kwenzekani ezakhamuzini zaleli dolobha. Radio ithelevishini ikakhulukazi, uma engekho, ukuze ngokuphelele yokuntula ulwazi ezweni ngaphandle / Kukhona yayingekho kokubukisa Presidential umkhankaso wokhetho, Gunernur, izimeya kanye regents, futhi akukho ukhetho dolobhana, futhi akukho engakaze esimisiwe inhloko emzaneni, isikhulu isihloko kuphela inhloko emzaneni / edolobheni. Akumangalisi uma engazange zonke izakhamuzi abe kazwelonke sekhadi (KTP). Abaningi Dayak waba abanamathele Christianity, ngoba lapho kungcono a lot umfundisi / Umpristi Netherlands ukuthi abaningi wangena ehlathini abaningi kusungulwa ibandla ehlathini. The izimpilo bakule ndawo ngokuvumelana nemvelo, ngoba ngokwemvelo bangakwazi nivune imiphumela esimeme. Ngo-1970, ngisho nakuba ubaba wayeyisosha, kodwa wanquma ukuthuthela emzini evela egibela ibutho Sentosa II Balikpapan, ngokwakha ekhaya zabo ebhishi Kampung Baru Central, Balikpapan, Kuyaqondakala thina sekelurga usunayo zakubo abantu abayisithupha (ampai umhlalaphansi, Ubaba wayenamadodana amahlanu, namadodakazi amahlanu) uma ibalwa kanye kwesisu kathathu, umama wazala (babe nezingane 13). Ngakho ubaba ukwakhela indlu sigaba omkhulu, lapho ngaphansi kolwandle ngaphansi indlu lapho ibuya). Ngakho WC / indlu yangasese / sendlu yangasese ngokushesha lingena olwandle. Kuyaqondakala lapho kwakungekho ukuhlela umndeni (KB), kanjalo bonke abantwana can umnyuziki elayisi Ukudla kusukela ehhovisi. Ngalesi sikhathi ebuntwaneni sethu izakhamuzi ndawonye zendawo ukuchitha isikhathi sokungcebeleka kanye berenamg futhi ukugwedla isikebhe encane ogwini yesokudla endlini. Ukudoba Kdang yethu, futhi bamba izinkalankala baningi ngemuva kwendlu. Ngaso sonke isikhathi sisekhona nabangane ushove izikebhe ukuba azungeze zemifula Wayne kanye nemifula elidabukisayo in a ekupheleni entsha emzaneni, khona thina menjaing izinkalankala kanye ezihlukahlukene zezinto eziphilayo, kuhlanganise ama-lobster futhi iminenke lomhlume (lomhlume lomnenke) elitholakala kabanzi emaphethelweni kwamahlathi lomhlume lapho namanje zihlobise ogwini the Gulf of Balikpapan. Ngo-1990 lapho sifika kule ndawo (emva umndeni wakithi wathuthela eJakarta ekuqaleni kuka 1973) nje ukuvakashela izihlobo umndeni abasahlala eLondon, sathola ogwini Balikpapan ngokuvamile bathola udoti plastic nokusaphaza ngaphandle kuchitheka. Suli wathi abadobi bendawo angatholakala kwezinhlobo eziningi baphinde zezinhlanzi, crab, izimfanzi (lobster) kanye iminenke kule lomhlume asogwini Balikpapan, ngaphandle lomhlume ubhujiswe, amabhishi ezingasogwini tercenar udoti ehlukahlukene. Siphinde akakwazanga ukuthola aphinde orangutan Daulu elenga kakhulu ezihlahleni kanye kusuka ezansi kuya umfula, kubandakanya Python bekulokhu kunzima ukuthola. Orang-utan singakghona kungatholakala ekuthunjweni utan orang in the wayn emfuleni zigcinwe Inhlangano kahulumeni esikhipha le Orang utan. Manje esiqhingini Borneo azisekho okwande esetshenziswa ehlane, manje htannya eziningi kushiswe ukushintshwa umsebenzi ngamafutha esundu emasimini, futhi ukugeleza kwamanzi umfula zincipha, ngoba imithi umsebenzi ukuba zikwazi ukumunca amanzi emvula ngaphambi kokuba agelezela emfuleni laqala ukunyamalala, Ukuhaha umnotho womuntu elivulekele amafutha yokulima Manje ovuthayo amahlathi, kuphumele Indonesia afakiwe eziphuthumayo izimo intuthu Indonesian komlilo wequbula sigameko can Samai 1997 (BBC) Forest nezwe imililo Indonesia ngo-1997 safinyelela izigidi amahektha. Izinga kanye nemithelela kwezomnotho ehlathini ezweni imililo eziningi izifundazwe Indonesia kungenzeka kakhulu ukufanisa izinga ezifuze ngo-1997, ngokusho abacwaningi. Through ukuqapha, Robert Field ukuhlola izwe futhi ushisa amahlathi ukuthi hit Indonesia kulo nyaka kakhulu. Field, umcwaningi Columbia University oqhuba izifundo ngesikhathi Goddard Institute for Space Studies Space Agency United States, ngisho ikholelwa ukuthi isimo in Indonesia kungaba nzima uma isomiso kuqhubeka ngenxa lomkhuba El Nino. "Izimo eSingapore yeSumatra kukhona indlela esondela engxenyeni eseningizimu-mpumalanga 1997 Uma sezulu kulindeleke kwenkathi yonyaka eyomile ihlala isikhathi eside, kwakungase kubhekwe ukuthi 2015 kuzoqoshwa njengoba sigameko kunabo bonke kuleli irekhodi," kusho Fields ecashunwa-AFP News Agency. In the period 1997-1998, uhulumeni Indonesian ilinganisela ukuthi inani ezweni echayeke umlilo kwafinyelela 750,000 amahektha. Nokho, izinhlaka ezehlukene kwemvelo ezifana Forum for the Environment (WALHI) zisanda inani kwafinyelela amahektha million 13. Khona ukutadisha National Development Planning Agency wayesizwa kanye Asian Development Bank (ADB) ilinganisela ukuthi inani ezweni abathintekayo ngomlilo kwafinyelela amahektha million 9.75. Mayelana emnothweni, inani balinganisela siyahluka. Umnotho futhi Environment Programme for mpumalanga Asia Indonesia kucombela yokulinyazwa US $ 5 billion ukuze $ 6 billion ngenxa ezweni ushisa amahlathi e 1997-1998. Khona, Bappenas futhi ADB Ucwaningo waloba ukulahlekelwa US $ 4,861, okulingana Rp711 trillion. Ukulahlekelwa Indonesia kwezomnotho ngenxa umlilo, nomusi ngo-1997 zazisuka $ 4 billion ukuze billion $ 9. Ecosystem nokuqinisela Herry Purnomo, socwaningo Center for International amaHlathi Research (CIFOR), futhi phikisana ezweni ushisa amahlathi kulo nyaka alingane irekhodi e 1997. "Lo mkhuba El Nino kulo nyaka kancane ezincane iqhathaniswa 1997 Nokho, esikwazi ukuzivuselela kweMvelo yethu engozini kakhudlwana imililo ehlathini ngoba kade ukwehliswa isithunzi embonini namafutha esundu emasimini," kusho Herrera etshela iBBC Indonesia, uJerome Wirawan. Herrera akazange siqambe kungenzeka ukuthi imithelela kwezomnotho ehlathini ezweni imililo kulo nyaka owayekwazi irekhodi 1997. "Isifundazwe can ukulahlekelwa Rp20 trillion kuphela ngenxa umlilo. Well, manje kukhona tifundza okungenani eziyisihlanu ezathinteka obukhulu, okungukuthi Riau, Jambi, South yeSumatra, West Kalimantan, futhi Central Kalimantan, "kusho Herrera. Ngokusho kwakhe, ukubaluleka ukulahlekelwa is hhayi kuphela ibalwa kuphela izinkuni umlilo ulahlekile. "Kukhona kuphazamisekile yomnotho, lapho abathintekayo impilo yomphakathi, amanzi kabana, ezokuthutha, futhi abanye," kusho Herrera. In an interview with BBC Indonesia, iNhloko Data Information and Public Relations of National Disaster Management Agency (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, uthe emnothweni ngentuthu inhlekelele ezenzeka ezifundazweni eziningana e-Indonesia ngo-2015 kungenzeka kwedlule 20 trillion. Lelo nani, wathi: ngokusekelwe idatha ngonyaka odlule. Kwathiwa yembula ukuthi ukulahlekelwa ngenxa Haze ngo-2014, kubalwa phezu izinyanga ezintathu kusukela February kuya ku-Ephreli kuphela isifundazwe Riau kwafinyelela Rp20 trillion. Izifundazwe ezintathu setha impendulo eziphuthumayo ASAP Land ushisa amahlathi ukuthi abangela ngentuthu sekuyinkinga umcimbi waminyaka njalo. Uhulumeni Indonesian waphikelela bengasamukeli olufikayo emazweni angomakhelwane, Singapore futhi Malaysia, okuyinto iminyaka eminingi kwaba nako ngentuthu kusukela wequbula futhi izwe e Indonesia. In a interview BBC, uMengameli Joko Widodo wathi Indonesia iye yenza nomzamo omkhulu sína, by zokuphaka izinkulungwane amalungu ezempi namaphoyisa kanye inqwaba ezinophephela emhlane ukuze banqobe. UMengameli Joko Widodo wathi kudingeka iminyaka emithathu ukuqeda umsebenzi ngokomzimba ukuze ukumisa haze. "Kusho sike sahlela bonke ukusingatha, kodwa lokhu kudinga isikhathi. I balinganisela iminyaka emithathu ukwenza umsebenzi odinga, "kusho Jokowi utshele BBC sika karishma Vaswani. Nakuba uNgqongqoshe amaHlathi kanye Environment, Siti Nurbaya, chaza uhlobo usizo Singapore kufanele anikele okufanayo nalokho kwama-Indonesia, ezinophephela emhlane Chinook, ukusiza blackout. Kodwa inombolo unit eyodwa kuphela. Ngoba izakhamuzi ukuvakashela isikhungo sezempilo siphakeme ngokwanele ezihambisana upper zokuphefumula pheshana ukutheleleka kanye yobudala engozini eziphakemeyo izinsana, sathatha ihholo uhulumeni umuzi ukusuka. Helda Suryani "Wathi (Singapore) kuphela ukunikeza indiza eyodwa, kanjalo ngaphandle amaphilisi ngasihnya 20 noma 30," kusho Siti. State of eziphuthumayo A isamba izifundazwe ezintathu, okungukuthi Riau, Jambi futhi Central Kalimantan uye eziphoqelelwe isimo esiphuthumayo ngemva kwamasonto komoya izinkomba esifundeni esigabeni esiyingozi. NgoLwesithathu, ngo-September 30, le ukungcola inkomba e Pekanbaru, Riau -according ekubalweni meteorology, isimo sezulu, kanye Geofisika- ukufinyelela 450 noma 100 ephakeme ukwedlula ezingeni ingozi. Desi kwaba isimo esithusayo, unina ngonyaka owodwa usana ubudala aphathwe esibhedlela e Pekanbaru, Riau, kusukela ukuhlupheka igciwane lung. Ukutheleleka kwabhebhethekiswa a haze aminyene ezinyangeni ezimbalwa ezedlule. "Indodana yami wayekade endlini, ungahambi kuphi ngenxa ngentuthu. Ingabe namanje ukuxhumana igciwane lung. Kungani uhulumeni lutho? Kungani ulinda kuze izingane zethu zifa ngenxa yokuthi intuthu Wathi? ". Chief Medical Officer of the City of Pekanbaru, Drg. Helda Suryani, wathi kuwo uye wathatha izinyathelo zokukhuthaza ehlukahlukene, kuhlanganise ihholo esitezi sesithathu esakhiweni samahhovisi Mayor Pekanbaru njengoba ukusuka izingosi izinsana izinyanga eziyisithupha ubudala. Ihholo is esiyi izingane ezine, owesifazane okhulelwe, futhi chaperones ezintathu umzali. NgoLwesithathu (30/09), the ukungcola inkomba e Pekanbaru, Riau, ngokusho ukubala meteorology, isimo sezulu, kanye Geophysics ukufinyelela 450 noma 100 ephakeme ukwedlula ezingeni ingozi. "Njengoba izakhamuzi ukuvakashelwa esikhungweni sezempilo siphakeme ngokwanele ezihambisana upper zokuphefumula pheshana ukutheleleka kanye yobudala engozini eziphakemeyo izinsana, sathatha umuzi uhulumeni ihholo ukuze kuphunywe," kusho Helda etshela izintatheli e Pekanbaru, Sari Indriati. Esiphuthumayo ngentuthu izindawo uthathwa ezibalulekile Azisman Saad, lung ongoti Pekanbaru. Nokho, ngokusho kwakhe, lapho sibaleka kwenziwa esifundeni efanayo, ngeke siphumelele. "Uma ukusuka e Pekanbaru futhi, ngicabanga ngempumelelo kancane. Ngoba Pekanbaru iye izulu ngentuthu, "kusho Azisman. Ngubani 'umlingisi' ngemuva ukushiswa kwamahlathi kanye nezwe? Ngalinye iqembu beqhuba ezweni ukusa imisebenzi uzothola iphesenti semali yayo siqu. Kukhona abadlali ngu-20 emkhakheni futhi athole izinzuzo zomnotho ehlathini nezwe imililo. Iningi ijwabu nesithakazelo futhi azuze Izıhlabane somnotho sisibi for akatelela ngomthetho isinyathelo. Uhulumeni action bopha noma ukushushisa abantu kanye nezinkampani kusolakala ushise indawo bekungeke kube ngokwanele ukuba ukuvimbela ngentuthu yansukuzonke. Amaqiniso futhi iziphetho okukhulunywa ngazo ngenhla ucwaningo on 'The Political Umnotho we Land and Forest Fire' of umcwaningi Center for International amaHlathi Research (CIFOR) Herry Purnomo. Kushuba ensimini, ngokusho Herrera, zenzeka ngoba izitofu abahlukumezi ehlathini, kokubili umphakathi kanye amakilasi phakathi kanti inkampani njalo uxhumene nabantu abanamandla, kokubili yesigodi, yezwe, ngisho kuze ezingeni ASEAN. Herry Purnomo cwaningo lwathola ukuthi intengo ezweni ususuliwe ngokuyishisa izovuka njengoba ngomumo ngokutshala amafutha esundu. "Akulula ababusi ngubani bayofuna (izinkuni evuthayo), kungenzeka ukuthi ine (garden) amafutha esundu, imililo hlathi, ezihlobene iqembu ethize ukuthi sinamandla endaweni, ngakho ibamba noma umbusi akulula kakhulu (oyibamba), kumele ubone umlaza lezombusazwe "Herry on BBC Indonesia, ngoLwesithathu (23/9). Lezi abadlali, ngako okusekelwe ocwaningweni lwakhe, ukusebenza njengoba oluthile "ubugebengu obuhleliwe". Kukhona amaqembu ukuthi afeze imisebenzi ehlukene, njenge izicelo zokubuyiselwa umhlaba, ukuhlela abalimi abangakholelwa wangiklwebha noma cutting noma evuthayo, kuze iqembu marketing kanye ezihilela izikhulu dolobhana. Kodwa hhayi kuphela ezingeni central, umnikazi kungaba izihlobo bakule ndawo, abasebenzi yenkampani, abasebenzi esifundeni, usomabhizinisi, noma zimali naphakathi kusukela Jakarta, Bogor, noma Surabaya. Ehleliwe Ngalinye iqembu beqhuba ezweni ukusa imisebenzi uzothola iphesenti engenayo yedwa, kodwa ngokwesilinganiso, ibhodi amaqembu umlimi wathola isabelo elikhulu semali, phakathi 51% -57%, kanti amaqembu abalimi wangiklwebha, ukusika, futhi ukushiswa uthola ingxenye engenayo ephakathi 2 % -14%. Ngo ucwaningo lwakhe, Herry bathola ukuthi intengo ezweni iye babeqoqa ukuhlanzwa emasimini wanikela ngenani lika RP million 8.6 ehektheleni. Nokho, izwe e 'ukulungele zokutshala' noma ashiswa esikhundleni kuyokwandisa intengo yalo, okungukuthi Rp11.2 million ehektheleni. Khona kweminyaka emithathu kamuva, emva Izwe liye watshala elungele ukuvunwa, abatshali kakade ngakho lingathengiswa ngentengo of Rp40 million ehektheleni. Image copyrightGETTY IZITHOMBE Image ncazo Abanikazi bemihlaba esivuthayo kungaba amadolobha ezinkulu noma izihlobo bakule ndawo, abasebenzi wesifunda, ukuba abacwaningi. The ukwanda ukubaluleka kwezomnotho ezweni yiso abadlali owayefuna ukuba bazuze ezweni ushisa amahlathi zenzeka njalo. Ngaphezu kwalokho, amaphethini ukuthenga nokuthengisa izwe, ukulungiselela izwe kungumsebenzi umthengi, uma uyosha noma bahlanza athutha. The eshibhile izindleko zokuhlanza, abathengi lucky kuyoba nakakhulu. Ukuze uqhathanise, ngokusho Herrera, per hectare wokushiswa izindleko $ 10-20, kanti izwe bahlanza athutha kudinga $ 200 ehektheleni. Herry Ucwaningo olwenziwe ezizindeni 11 ezifundeni ezine Riau, okungukuthi Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai futhi Bengkalis usebenzisa namabalazwe, wezokwakha, futhi inqubomgomo izindlela. Ngo Riau, kukhona 60 amafutha esundu emasimini industrial umuthi emasimini 26. Abashisekeli Political Izinkampani noma abantu endaweni eyaba umnikazi amafutha esundu emasimini endaweni ungathola abashisekeli yezombusazwe ezingeni lendawo. Herrera waveza, "Uma kuvuka yabadobi amabhizinisi ukuthi abe ngumsizi wabaningi amaqembu enamandla kakhulu ezombusazwe esifundeni ezithinta izinqubo tincumo kanye nokugcizelela endaweni. Kungenzeka ukuthi kukhona abalandeli eqinile okulesi." Abadlali ezingeni Intermediate noma 'izikhulu', Herrera wathola, kungaba ubani. "Kusukela izikhulu zikahulumeni ngabanye, amaphoyisa, amasosha, abacwaningi, ezingase zihileleke, angaba kuze namakhulu hectares esundu namaqabunga esundu in inqubo yentuthuko kungaba (ukukwenza) evuthayo ukwamukela zemvula ezayo," esho. Izıhlabane lokhu illegible noma ubanjwe iphethini komthetho okwenzekayo manje ukubhekana ngentuthu. Ukuze uthole it, kubalulekile ukulandelela lapho imikhiqizo lamafutha esundu kusukela emasimini is ibuyiselwa. Fuel izwe Against la okutholakele, okhulumela Association of Indonesian ofisi Association (GAPKI), Tofan Mahdi, wathi kukhona 2,500 izinkampani amafutha esundu class amancane kanye maphakathi, futhi inani kukhona izinkampani 635 kuphela ukuthi kukhona amalungu GAPKI. Haze e Riau sekuqhubeke iminyaka the last 18 iminyaka. "Lokho kanjalo namalungu ethu ngiyaqiniseka akukho (evuthayo ezweni), ngoba thina ukulawula up and down. Amalungu Ngaphandle GAPKI, thina akudingeki izinto zokubethwa noma izithakazelo, kodwa sikhuthaza, ukusekela lokho wethulwe yi umbusi South Kalimantan isibonelo, ukuze zikwazi (zikawoyela amafutha Small kanye medium) ukuba yilungu GAPKI ukuze ukulawula kalula, "esho. Nokho, Tofan bayavuma ukuthi abazange kwadingeka indlela okunzima ukuqapha ukuze phansi. "Kodwa GAPKI babe namazinga, izidingo, nemithetho ngokuhambisana nemithethonqubo at the central, endawo nawesifunda," esho. Ngaphezu kwalokho, amaphoyisa Riau umise PT Inti Langgam Izinhlobo ubuye GAPKI ilungu njengoba esola wequbula. Imizamo komthetho ukuthi ziye kude kangaka kumthinte abashisekeli ezombusazwe ukuvikela inkampani noma umnikazi womhlaba kushiswe. Edi Saputra, abalimi Ogan Ogan Ilir, South yeSumatra wathi umkhuba ovuthayo izwe kakade sekuqalile emphakathini amakhulu eminyaka. Kodwa mkhuba akukhona eyenziwa minyaka yonke, ngokuvamile 5-10 kuphela iminyaka luqondane isizini ukutshala. "Sine amakhulu eminyaka ukuba ashise, kodwa kungani thina Fuss manje mayelana intuthu, kusho, kungani kubonakala nomlilo onamandla? Ngoba bonke isandla kulo kunikezelwe corporation, ngakho izwe oluvutha kalula kangaka. Izinkampani Land lokho emzimbeni, ngeke atshalwe ilayisi . Manje kunakuqala, kude impela, uma emibi, kukhona amabala yomlilo, ngqo evuthayo izwe, "esho. Unswinyo wequbula: Kungani izinkampani ezinkulu 'ningathinti'? 23 September 2015 Iningi ihlathi incendiary ayekade uboshwe, kodwa inqubo ngonya Izishoshovu Environmental e Riau bayakwazisa unswinyo ukuba izinkampani ezihlobene ezweni ushisa amahlathi ESumatra, kodwa bebuza ukuthi kungani eziningi izinkampani okusezingeni profile 'ningathinti'. Coalition uqaphe ukuqothulwa kwamahlathi e Riau wathi, uhulumeni zingakhiqiza a unswinyo firmer ukuletha icala enkantolo futhi zidinga izinkampani ukukhokha isinxephezelo abantu ehlaselwe haze. "Ukupha unswinyo zaba isinyathelo ngokushesha, ngempela ethembisayo. Kodwa, sizobona ukuthi izinyathelo ezifanayo ngeke kwenziwe ezinkampanini ezinkulu sitholakale aqoshiwe imililo kanye nemililo abanolwazi minyaka ngemvume endaweni yayo," kusho umfelandawonye isishoshovu uqaphe ukubhujiswa Forest (Eyes ihlathi) esifundazweni Riau, Afdhal Mahyuddin, utshele BBC Indonesia, Heyder Affan, ngoLwesithathu (09/23) ekuseni. Phambilini, izinkampani ezine yeSumatra kugunyazwe Ministry of Environment and Amahlathi (KLHK) ezihlobene ezweni ushisa amahlathi. Izinkampani ogama amalayisensi imisiwe PT LIH (Riau), PT TPR (South yeSumatra) kanye PT WAJ (South yeSumatra), kanti PT HSL (Riau) ilayisensi iye ichithwe. Izinkampani kumele ahlinzeke imishini lokuvikela umlilo Izinkampani kumele kumiswe konke ukusebenza ensimini futhi ukuhlangabezana nezibopho zayo, ezifana nokukhandela umlilo imishini umphelelisi. Lokhu imvume lwalusekelwe izindaba senzakalo esikhethekile msebenzi force (Satgasus) Ministry of Environment and amaHlathi. Bathi okwamanje bavakashela izindawo 286 wokushiswa e yeSumatra and Kalimantan. Pay isinxephezelo Ngaphezu kwalokho Afdhal Mahyuddin uthe akuzange kummangaze kakhulu ukuzwa ukuthi uhulumeni iqandiswe the LIH imvume PT. "Ngoba, ngo-2013 bese, baye baba umsolwa kuze kube untried," kusho Afdal. Ngokufanayo, Afdal akuzange kummangaze kakhulu lapho uhulumeni ichithwe ilayisensi ibhizinisi PT HSL in Riau. "Ngokwemvelo, uye nje waba abapholile," usho kanje. Nokho, wanezela, uhulumeni kumele bakwazi ukunikeza unswinyo efanayo, noma firmer, nezinye izinkampani ezinkulu lapho iminyaka ngokwenza ukwephulwa efanayo. "Kuyajabhisa, kukhona eziningana izinkampani isandla kuboniswe nokwephulwa. Ngokumangalisayo, kungukuthi ichithwe noma ajeziswe kanzima," kusho Afdal. Izishoshovu babheka, izinkampani eziningi ezinkulu kudlule ihlathi incendiary "Ngicabanga ukuthi idinga isinyathelo ngokumelene amabhizinisi ezinkulu noma profile okusezingeni," usho kanje. Wabuye ehlongozwayo, isigwebo kufanele ngaphezu nje ukumiswa noma sokwesulwa kwelayisensi yokusebenza yayo, ezifana ngokuletha icala enkantolo obugebengu noma civil. "Baphinde babe ukukhokha isinxephezelo emphakathini abathintekile kabanzi ngenxa ngentuthu," esho okunye. Okwamanje, iqembu wavakashela 286 izindawo KLHK wokushiswa e yeSumatra and Kalimantan. Ngaphezu kwalokho, wathi: KLHK uthe inkampani kumiswe ilayisensi uyakuba ukuqedela nengqalasizinda okusamelwe zigcwaliseke ukunciphisa lungaba imililo. Freezing kuzoba nomthelela sokwesulwa kwelayisensi uma inkampani etholakala enecala enkantolo, kusho izikhulu KLHK. Yabelana ngalezi zindaba Mayelana b "Kuyini uhulumeni elinde izingane zethu zifa ngenxa ngibheme?" Ekamelweni ifakwe air Regulator esitezi sesithathu City Hall Pekanbaru, Apriyani ebuka usana olunezinyanga ezine luzelwe, walala ubuthongo. Owesifazane oneminyaka engu-35 ubudala ungomunye omama abane ababekhululiwe ngiphephelé ukunakekelwa usana eziphuthumayo enikeziwe Pekanbaru umuzi uhulumeni. Lona umzamo ukuvikela umntwana intuthu toxic ngenxa ezweni ushisa amahlathi eziye kwenzekani izinyanga. "Lapha, umntanami free intuthu. Ngokungafani ekhaya," kusho Apriyani. 'Uma sihlala ekhaya, ingane yami is ukukhwehlela njalo. Uma lapha, ihhovisi ivaliwe, futhi kukhona air wokuhlanza. Ukungcoliswa Air e Pekanbaru aqoshiwe 1000 izibalo ukungcola Standard Index (PSI). Nakuba 100 PSI yedwa libhekwa njengoba okungenamsoco, futhi uma ezingaphezu kuka-300 uyingozi. "Izinsana abahlukumezeka kakhulu. Lokhu baby esifanayo ukhwehlela njalo" Akukho baby imibhede eziqashiselwa, futhi oxygen amasilinda, kodwa Afriyani mengaakan wayengafuni ukuba bahlale khona isikhathi eside. "Ngifisa sengathi uhulumeni ukusebenza ngokuzikhandla ukuze kuqedwe intuthu, ukuze izingane zethu bengayi kanzima njalo. Ngoba kuyinto embi empilweni yazo, ilungelo? UDkt Helda Suryani, inhloko yomnyango wezempilo e Pekanbaru uthe yokukhosela kwakuzokwenziwa ikakhulukazi emindenini ehlwempu abangenabani. "Abacebile siqu sabo air conditioning, futhi ungathola ngokwabo indawo iphephe. ​​Nakuba le ndawo yalabo izindlu sibona nsuku zonke egcwele intuthu eyingozi. Lapho ebuzwa eside ukuthi kungani kunjalo emva uhulumeni omusha ukunikeza yokukhosela, wahleka wryly. "Kungani kungithathe isikhathi eside kangaka? Sake uthandazela imvula, futhi lapho sebutho seza ukusiza, air wezindlu izinsuku ezimbili. Kodwa manje nalapha futhi. Ngakho bekungaba njani lokhu phakade." Njengoba for Desi, isivikelo sekwephuze kakhulu. Lokhu umama osemncane ehleli naye ngonyaka owodwa ubudala ngesikhathi Hospital of Santa Maria. Wabe kwatholakala igciwane lung. "Ngigcina ingane yami ngaphakathi endlini sonke isikhathi. Thina ngeke kuphi ngenxa yalesi intuthu, kodwa indodana yami namanje ukuxhumana pneumonia." "Kungani uhulumeni lutho?" wabuza "Ingabe uhulumeni elinde izingane zethu zifa ngenxa ngibheme?" (BBC)